WARARKA XAFIISKA DACWADA & TARBIYADDA
Olole lagu ciribtirayo qoris iyo akhris la’aanta oo ka bilowday Gaalkacyo
Simnaar socday muddo bil ah oo lagu soo gabagabeeyey markazka al-imaam al-bukhaari
Habeenimadii jimcaha 22/07/2004 ayaa laga bilaabay masjidka Salaaxudiin ee magaalada Gaalkacyo olole lagaga tirtirayo magaalada Gaalkacyo akhris iyo qoris la’aanta af Carabiga, isla markaana lagu faafinayo luqadda Carabiga. Waxaana is diiwaan galiyay macalimiin u diyaar ah inay dadkooda si lacaga la’aan ah wax ku baraan, ka dibna waxaa is qoray odayaasha masjidka S/diin oo u diyaar ah inay isku dubbaridaan hawlaha waxbarista dadweynaha, waxaa kale oo lagu yaboohay qalab waxbarasho oo isugu jira buugaag, sabuurado iyo jeesto. Jamaacada masjidka iyo dadkii kale ee ka soo qaybgalay muxaadaradii masjidka ka dhacday ayaa muujiyay xiiso iyo diyaar garaw ballaaran. Masaajidda kale ee magaalada ayaa iyana lagu soo bandhigi doonaa ololahaan. Waxaa ka faa’iidaysan doona ololahaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rag iyo dumar, yaryar iyo waaweyn. Sh. Axmed C/samad oo ka hadlayay ujeeddooyinka laga leeyahay ololahaan ayaa yiri: hadafku waa in aynu dadkeenna waxbarno oo ka saarno jahliga, sidaa darteed qof kasta waa inuu faa’iidaysto cidda uu doono wax ha ka bartee.
Waxaa xusid mudan in ololahaan oo kale uu hore uga hirgalay magaalada Muqdisho iyo gobolo kale oo ku yaal koonfurta Soomaaliya, lagana gaaray guulo waaweyn, dhacdooyinka xiisaha leh oo ku saabsan arrintaasna waxaa ka mid ah: Islaan 65 sano jir ah oo baratay qorista iyo akhriska oo markii ugu horraysay oo ay akhriday KITAABKA QUR”AANKA ah oyday, isla markaana tiri: haddaad waxaan taqaanneen maxaad intaas oo dhan noo bari waydeen??!!!.
Duruusta farbarka iyo af Carabiga waxaa lagu dhigayaa masaajidda, dugsiyada Qur’aanka, xarumaha dacwada iyo goob kasta oo dad badani isugu imaan karaan, waxaa la bixinayaa duruusta waqtiyo kala duwan, si qof kasta uu u dhigto waqti uu firaaqa yahay, tan kale qof kasta wuxuu isku qorayaa heerka uu joogo, sida: farbarasho, heer dhexe iyo mid sare.
Ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Gaalkacyo inay muddo sannad gudihiis ah kaga ciribtiraan qoris iyo akhris la’aanta magaaladooda. Culimada, ducaadda, macalliminta Qur’aanka, kuwa iskuullada iyo cid kasta oo aqoon leh waxaan ka codsanaynaa inay dadkooda si hagar la’aan ah wax u baraan, sidoo kale Isimada, cuqaasha, maalqabeenka, maamulka gobolka iyo degmada waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan hirgalinta ololahaan.
Qardho oo Lagu Qabanayo Nadwo Cilmiyeed
Simnaar wacyi galin iyo aqoon kororsi ah oo soconayay muddo bil ah ayaa lagu soo gabagabeeyey maalinimadii shalay ee jimcaha oo taariikhdu ahayd 23/6/2004 machadka imaam al bukhaari ee horumarinta iyo wacyi galinta bulshada ee magaalada muqdisho.
Simnaarkan waxaa loo qabatay wiilasha dhigta dugsiyada hoose dhexe ee magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa dagan xaafada Tawfiiq, halkaas oo ay ka faa'iideysteen arday dhan ilaa ( 70 ) ardey . waxaa ay ardeydaasi ku barteen simnaarkan kutub ay ka mid yihiin tafsiirka qur'anka kariimka ah juskiisa camma, arbaciinka imaamu nawawi, usuulu al –sasaasaha imaamu maxamed cabdi wahaab, siirada nabi maxamed nabad galyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee iyo kutub kale oo badan.
Mamulaha markaska imam al-bukhaari Abuukar yaasiin oo xafladii xiritaanka simnaarkan ka hadlay ayaa sheegay in ujeeddooyinka Seminaarkan ay ka mid yihiin:
1. In dhallinyarada wax laga baro diintooda, lana siiyo tarbiyo islaami ah.
2. In firaaqadooda lagu buuxiyo wax anfacaya adduunkooda iyo aakhiradooda.
3. In laga hortago afkaarta iyo dhaqamada xun xun ee lagu faafinayo dhallinyarada Soomaaliyeed.
4. In la dareensiiyo xilka ka saaran hagaajinta iyo horumarinta bulshada, laguna wacyigaliyo qaddiyadaha umadda islamka, lana baro cadawgooda iyo sokeeyohooda.
5. In sare loo qaado hankooda, isku kalsoonidooda, hal abuurkooda, kala dambayntooda iyo ka dhabaynta waxqabadka wanagsan.
6. In ay isbartaan, isuna kaashadaan khayrka iyo ka hortagga xumaanta
Xafladan oo si aad u wanaagsan uga dhacday markaska imaam al-bukhaari ayaa waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyey tobankii ardey ee ugu darajo sareysay imtixaankii laga qaaday ardeyda.
Waxaa xiritaankii xafladaan mahadcelin iyo bogaadin ka soo jeediyey qaar ka mid ah waalidiintii caruurtoodu ka faa'iideysteen simnaarkan, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa (aad ayaan ugu mahad celinaynaa maamulka markaska imaam al-bukhaari iyo cid walba oo ka qeyb qaadatay in uu hir galo simnaarkani, waxaan kale oon u mahad celinaynaa culumadii ugu deeqday cilmigooda iyo waqtigoodaba caruurteena ).
Sheikh c/casiis oo ka mid ahaa culumadii wax ka dhigaysay simnaarka ayaa si farxad ku jirto u yiri ( waxaa aad ii farax galiyey mudadii aan wax ka dhigayey simnaarka sida wanaagsan ee caruurta soomaaliyeed ay ugu dadaalayaan uguna tartamayan barashada diintooda islaamka, taasoo muujinaysa in mustaqbalka ummadda soomaaliyeed uu wanaagsan yahay.
Simnaarkani waxa uu qeyb ka ahaa olole balaaran oo baryahaan ka socday magalada muqdisho, ayna wadeen qaar ka mid ah culummo iyo aqoon yahanno soomaliyeed, laguna wacyi galinayey ardeyda wax ka dhigata dugsiyada h/dhexe, sare iyo jaamacadaha jaamacadaha magaalada.
Xafiiska dacwada iyo tarbiyda soomaaliyeed